Youkwesịrị iyi mkpuchi ihu na ogige ntụrụndụ site na echi? - Thrilltalk.com
Home/Okwu ogige/Youkwesịrị iyi mkpuchi ihu na ogige ntụrụndụ site na echi?
0 31 Nkeji 1
Iji gbasaa ya nje Corona Iji gbochie nke a, ndị ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ime ka ọ bụrụ iwu na ha ga-eyi ihe mkpuchi ọnụ n'ụlọ ahịa, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe ihe nkiri site na 1 Disemba. Na agụmakwụkwọ kwa (ewezuga ụlọ akwụkwọ praịmarị) ndị mmadụ ga-eyi mkpuchi ihu.
O tosiri na m ga-eyi ihe mkpuchi onu n’ogige ntụrụndụ?
Na weebụsaịtị nke Ọchịchị etiti na-ekwu ihe ndị a:
'Masking ọrụ na-emetụta niile ọha n'ime oghere, ụlọ ojii na ọdụ ụgbọ elu. Ihe omuma atu nke ime obodo bu ulo ahia, ulo ihe ngosi nka, ulo mmanu, ihe nlere na ulo akwukwo. Achọghị mkpuchi ọnụ ma ọ bụrụ na ndị mmadụ enwee oche. ' Banyere ogige ntụrụndụ enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla akọwapụtara nha.
Iji dokwuo anya, anyị gosiputara nke a na onye nnọchianya nke Ọchịchị etiti na ọ na-ekwu ihe ndị a banyere ya: "Ee, ogige ntụrụndụ daa n'okpuru oghere ọha ma ọ bụ iwu na ị ga-eyi ihe mkpuchi ọnụ na ebe ọha."
Ọ gaghị abụrụ onye ọ bụla ihe ijuanya na a hụrụ ọdụ ọdụ ụgbọ oloko, etiti obodo, ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ahịa dị ka ebe ọha na eze. Ma ogige ntụrụndụ bụ ihe ọ bụla mana oghere ọha, ka emechara, ị ga-akwụ ụgwọ iji tinye saịtị ahụ.
Anyị rịọrọ ya Efteling ma ha nyere anyị azịza doro-anya ma doo-anya.
"A dụrụ ya ọdụ ka ọ na-eyi ihe mkpuchi ọnụ n'ime ụlọ na n'èzí, ebe ị na-etinye ma na-ewepụ ihe mkpuchi ọnụ dị ka o kwere mee. Site na 1 Disemba, ọrụ mkpuchi na-emetụta ndị ọbịa gbara afọ 13 na okenye na mpaghara ime ụlọ niile."
Yabụ ịkwesịrị itinye ihe mkpuchi ihu ma ọ bụrụ na ị nọ n'ahịrị na Ememe Carnival (n'ihi na nke a kpuchie) mana Joris en de Draak ọ bụghị iwu, mana ọ dụrụ ọdụ (n'ihi na ọ bụ n'èzí).
nkpuchi ọnụ ogige ntụrụndụ oghere ọha ọchịchị etiti achọrọ
Dinos weghaara Duinrell n'oge ezumike mgbụsị akwụkwọ